China i-Working Principle Of The Power Brake Booster ifektri kanye nabaphakeli | I-TieLiu
I-booster vacuum isebenzisa umgomo wokuncela emoyeni lapho injini isebenza, okudala isikhala ohlangothini lokuqala lwe-booster. Ukuphendula umehluko wengcindezi womoya ojwayelekile ngakolunye uhlangothi, umehluko wengcindezi usetshenziselwa ukuqinisa umfutho wamabhuleki.
Uma kukhona umehluko omncane wengcindezi phakathi kwezinhlangothi zombili zesiyaluyalu, ngenxa yendawo enkulu yedayiframu, kusengakhishwa umfutho omkhulu wokucindezela i-diaphragm ekugcineni ngokucindezela okuphansi. Lapho kubhulekelwa amabhuleki, uhlelo lwe-vacuum booster luphinde lilawule i-vacuum engena ku-booster ukwenza i-diaphragm ihambe, futhi isebenzise induku yokucindezela ku-diaphragm ukusiza umuntu ukuthi anyathele futhi acindezele isisekelo sebhuleki ngedivayisi yezokuthutha ehlanganisiwe.
Esimweni esingasebenzi, intwasahlobo ebuyayo yensimbi yokulawula i-valve push isunduza i-valve valve push rod endaweni yokukhiya ngakwesokunene, futhi itheku le-vacuum valve lisendaweni evulekile. Intwasahlobo yokulawula i-valve yenza inkomishi ye-valve yokulawula nesihlalo se-valve yomoya sixhumane kakhulu, ngaleyo ndlela kuvalwe imbobo ye-valve yomoya.
Ngalesi sikhathi, ikamelo legesi elingenalutho kanye negumbi legesi lesicelo le-booster liyaziswa ngesiteshi segumbi lesicelo segesi ngokusebenzisa ishaneli legesi yegumbi lomzimba lomzimba we-piston ngomgudu we-valve yokulawula, futhi ahlukanisiwe nomoya ongaphandle. Ngemuva kokuthi injini iqalisiwe, i-vacuum (ingcindezi engemiyo yenjini) ezinhlangothini eziningi zokungeniswa kwenjini izokhuphukela ku -0.0667mpa (okungukuthi, inani lengcindezi yomoya lingu-0.0333mpa, futhi umehluko wengcindezi nengcindezi yasemkhathini ngu-0.0667mpa ). Ngemuva kwalokho, i-booster vacuum kanye ne-vacuum yegumbi lesicelo lenyuke lafika ku -0.0667mpa, futhi babekulungele ukusebenza nganoma yisiphi isikhathi.
Lapho unyathela amabhuleki, iphedali yebhuleki icindezelekile, futhi amandla e-pedal akhuliswa yi-lever bese esebenza kwinduku yokuphusha ye-valve yokulawula. Okokuqala, intwasahlobo yokubuyisa yenduku yokulawula i-valve icindezelwe, futhi induku yokulawula i-valve yokulawula ne-valve yomoya iya phambili. Lapho induku ye-valve yokulawula iqhubekela phambili lapho inkomishi ye-valve yokulawula ixhumana khona nesihlalo se-vacuum valve, itheku le-vacuum valve liyavalwa. Ngalesi sikhathi, i-booster vacuum negumbi lesicelo lihlukanisiwe.
Ngalesi sikhathi, ukuphela kwekholomu ye-valve yomoya kuthinta nje ubuso bediski yokuphendula. Njengoba induku ye-valve yokulawula iqhubeka nokuqhubekela phambili, imbobo ye-valve yomoya izovuleka. Ngemuva kokuhlunga umoya, umoya wangaphandle ungena egumbini lokufaka isicelo se-booster ngokusebenzisa ichweba le-valve yomoya evulekile nesiteshi esiholela egumbini lomoya lesicelo, futhi amandla e-servo akhiqizwa. Ngoba okokusebenza kwepuleti lokuphendula kunesidingo sendawo ebonakalayo yengcindezi elinganayo yeyunithi ebusweni obucindezelweyo, amandla e-servo anda ngesilinganiso esinqunyiwe (isilinganiso se-servo force) ngokunyuka okuthe ngcembe kwamandla okufaka wolawulo lwevalve valve push. Ngenxa yomkhawulo wezinsizakusebenza zamandla we-servo, lapho kutholakala amandla amakhulu we-servo, okungukuthi, lapho i-vacuum degree yegumbi lokufaka isicelo ingu-zero, amandla e-servo azoba njalo futhi ngeke esashintsha. Ngalesi sikhathi, amandla wokufaka namandla okukhipha we-booster azokhuphuka ngenani elifanayo; lapho i-brake ikhanseliwe, i-control valve push rod ibuyela emuva ngokuncipha kwamandla wokufaka. Lapho indawo yokufukula ephezulu ifinyelelwa, ngemuva kokuvulwa kwembobo ye-vacuum valve, i-booster vacuum negumbi lomoya lesicelo lixhunyiwe, i-vacuum degree yegumbi lesicelo izokwehla, amandla e-servo azokwehla, nomzimba we-piston uzobuyela emuva . Ngale ndlela, njengoba amandla okufaka ancipha kancane kancane, amandla e-servo azokwehla ngesilinganiso esinqunyiwe (isilinganiso se-servo force) kuze kube yilapho ibhuleki likhishwa ngokuphelele.
I-Auto Brake, I-Aftermarket Brake Booster, Amandla Brake Ukulekelela, Umshini Brake Ukulekelela, I-Booster Assy Brake, Brake Servo,